Zymplify: Ahịa dị ka Ọrụ maka obere azụmaahịa | Martech Zone
Mmepe mmepe, usoro, na njikọta na-aga n'ihu itinye nyiwe n'ahịa na-enye plethora nke atụmatụ na obere ụgwọ kwa afọ. Zymplify bụ otu n'ime nyiwe ndị ahụ - igwe ojii ahịa ahịa nke na-eweta atụmatụ niile dị mkpa maka obere azụmaahịa iji dọta, nweta, na ịkọ akụkọ banyere ịntanetị. Agbanyeghị, ọ na-eme ya maka ihe na-erughị ọtụtụ nyiwe akpaaka ahịa ndị ọzọ na ahịa.
Site na saịtị: Zymplify bụ Ahịa dị ka Ọrụ. Anyị na-agbanwe ụzọ azụmaahịa na ire ahịa na-arụ ọrụ ma jikọta ha nke ọma na azụmaahịa gị. Ndị otu anyị nke ZympliGurus nọ n'aka, na-achọ, iji nye ndụmọdụ ndị ọkachamara na ọrụ ahịa ahịa dijitalụ zuru oke. Site na ngwọta anyị niile, anyị na-enye azụmahịa gị ikike ịmepụta, bipụta, soro ma nyochaa mkpọsa ahịa gị niile yana mmemme sitere na otu ikpo okwu jikọtara.
Ikekwe ihe kachasị mma banyere ikpo okwu bụ ụgwọ. Zymplify nwere otu atụmatụ na-enweghị nkwekọrịta ọ bụla kwa afọ yana enweghị ego na-ewe kwa afọ. Enweghị ụgwọ ọ bụla maka kọntaktị ọzọ ma ọ bụ njedebe na kọntaktị. Ọzọkwa, enweghị ntọala ọzọ, ịbanye n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgwọ kickstarter. Ọbụna ọ gụnyere nkwa ịkwụ ụgwọ afọ 90 maka ego.
Ego ị na-akwụ kwa ọnwa gụnyekwara kredit iji nweta nkwado na ZympliGuru otu ahia ahia kwa ọnwa.
Zymplify Marketing dị ka Ọrụ gụnyere
Ibe akwukwo - Mepụta, bido ma chụọ ihu na mkpọsa peeji gafee ọwa niile
Msdị & Pop gbasie - Soro na ụdị weebụsaịtị na mmapụta
Ndepụta nleta ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ -Ha onye na-eleta weebụsaịtị gi na ihe ha na eme
email Marketing - Mepụta na-ekere òkè email mkpọsa ngwa ngwa na mfe
Mobile Marketing - Soro ndị ahịa banye na SMS site na inbound na outbound
Social PPC Ahịa - Soro ndị ahịa gafee nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta
Scorecards nke Channel - Sochie, nụchaa ma tụọ mmetụta nke mbọ ahịa
Ahịa Ahịa - Ntughari aka na ahia site na CRM
Otu Ndị Ahịa Na-ele - Ejikọtara echiche nke njikọ ndị ahịa niile site na ọwa na CRM
Kalinda ahia - Sochie ọwa gị niile site na kalịnda ahịa jikọtara ọnụ
Mgbasa Ozi ROI - Tụọ ROI agbakwunyere site na mkpọsa na ọwa
Ndu isi - Tinye akara n'ọkwá na-eduga iji chọpụta njikere ahịa ha
Nchọgharị mmekọrịta - Chọta profaịlụ ọha na eze-dị na ntanetị, foto profaịlụ na mmetụta mmekọrịta
Onye Nrụpụta Ihe Ndepụta - Mfe ewu customizable, mobile kachasị ọdịda peeji na email ndebiri
Nkewa - Zipu ozi ziri ezi nye onye ziri ezi, oge obula
Debanye aha maka ikpe ikpe n'efu
Zymplify na-enyekwa ịkpọtụrụ na ụlọ ọrụ mmekọrịta.
Tags: mkpọsa ROIakara kaadịCRMemail Marketingformsmbido peeji nkendu akaraahia dika orukalenda ahiaahịa efummapụtapopupppcppc ahịaROIpipeline ahịankewaotu echiche ndị ahịamgbasa ozi na-elekọta mmadụnyocha mmadụnyocha mgbasa ozi mgbasa ozionye nrụpụta ihensuso websaịtị nletazymplify